कोरोना कहरमा मौलाउँदै कालोबजारी «
कार्तिक ७, २०७८ आईतबार
कोरोना कहरमा मौलाउँदै कालोबजारी
प्रकाशित मिति : असार २, २०७८ बुधबार
कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना महामारीको यस्तो सङ्कटको समयमा हरेक क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन कालोबजारी बढ्दै गइरहेको छ । कोरोना महामारीबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चिन्ताले मानव समुदाय छटपटाइरहेको यस्तो सङ्कटको समयमा समेत कालोबजारी गर्ने र कमाउको धन्दा चलाउनेहरू सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् ।
कोरोना महामारीले ज्यान जोगाउनसमेत धौधौ परेको समयमा मानवता हराएका, मानवीय संवेदना हराएकाहरूको असली रूप हाल बजारमा प्रस्ट रूपमा देखा पर्न थालेको छ । सरकारले देशव्यापी निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै सम्पूर्ण पसल र बजार बन्द रहेको र कतै सीमित समय मात्र खुल्ने भएकाले व्यवसायीले उपभोग्य सामग्रीमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्न थालेका छन् । अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा मनोमानी मूल्यवृद्धि भएको छ । महामारीको यस्तो सङ्कटको समयमा उपभोक्ताहरू दोब्बर मूल्य तिरेर सामान किन्न बाध्य भएका छन् । महामारीमा ज्यान जोगाउनका लागि उपचार खोज्दै अस्पताल पुगेका निरीह नागरिकहरू औषधी उपचार सेवामा समेत ठगिने गरेका छन् । मुख छोप्ने मास्कदेखि भोक मेटाउने चामल र तरकारीमा समेत नागरिकहरू ठगिएका छन् । रोगसँगै भोकबाट जोगिन खोज्दासमेत नागरिकहरू ठगिनुपरेको छ ।
हाल नेपालका सबै निकायको ध्यान कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रहेकाले अनुगमन गर्ने संयन्त्रमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । कोरोनाकै कारण अनुगमन गर्ने कार्यमा जनशक्तिको अभाव रहेको देखिन्छ । केही जिल्लाका पसल र बजारमा अनुगमन भए पनि नियमित हुन सकेको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निषेधाज्ञाको बहानामा सुस्ताएको छ । अनुगमनकै अभावका कारण कालोबजारी बढ्दै गएको छ । कालोबजारी बढेसँगै उपभोक्तामा आर्थिक भार थपिँदै जान थालेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण अहिले काम गर्नका लागि बाहिर निस्कने अवस्था छैन । अहिले गरिब, ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकहरू भोकभोकै बसिरहेका छन् । महामारीको असरले भोकभोकै बसिरहेका निरीह नागरिकलाई राहत दिने र अत्यावश्यकीय वस्तुको सुलभ पूर्ति गर्ने विषयमा सरकार, कुनै पनि राजनीतिक दल र अधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । यही बेलामा ‘मौकामा चौका’ हान्नेहरूको ठूलो जमात बजारमा व्याप्त छ ।
फलस्वरूप दिनप्रतिदिन बजारमा कालोबजारी मौलाउँदै गइरहेको छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके बजारमा कालोबजारी तीव्र रूपमा बढ्नेछ र उपभोक्ताहरू मूल्य ठगीको मारमा पर्नेछन् । कालोबजारी नियन्त्रण गर्नका लागि कालोबजारी गर्ने जुनसुकै निकाय, संस्था र व्यक्तिलाई कुनै कसर बाँकी नराखी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नियामक निकाय चनाखो र उपभोक्ता सचेत बन्नुपर्छ । आपूर्ति असहज भएर बजारमा वस्तुको अभाव भए त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । कालोबजारी भ्रष्टाचारजन्य कुरीति हो । हामी सबैै मिली यसको नियन्त्रण गरौैँ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ खाता योजना
‘चौरासी व्यञ्जन’ पुस्तक सार्वजनिक
सिबिआईएल क्यापिटलको २५ प्रतिशत लाभांश पारित
कृषि विकास बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्ने
सन्राइज बैंकका ग्राहकलाई केएफसी र पिज्जा हटमा छुट
सानिमा बैंकका नयाँ शाखा काठमाडौंको चपली र भक्तपुरको बालकोटमा
प्यान्डोरा पेपर : कालोधनको बिगबिगी
सन् २०१० पछि बैंकरहरू, ह्याकरहरू र खोज पत्रकारितामा लागेका पत्रकारहरूले स्वीस बैंक र कर लुकाउने
लगानी प्रस्ताव बढ्नु सकारात्मक संकेत
गत दुई आर्थिक वर्षमा कोरोना कहरका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सुस्तता आउनु स्वाभाविक थियो
सकसमा कर संकलन र सदुपयोग
देश विकासका लागि आवश्यक बजेटको जोहो गर्ने विभिन्न उपायहरू हुन्छन् । वैदेशिक अनुदान, ऋण सहयोग,
कोरोनाको कहरमा बिदेसिनुको पीडा
मानिसहरू रोजगारीको सिलसिलामा आफ्नो घर, गाउँ तथा जन्मस्थल छाडेर उपत्यका पस्ने गर्छन् । ठूला–ठूला सपना
धान क्षतिको विवरण संकलन गर्दै स्थानीय तह
बेमौसमी भारी वर्षाले ४० प्रतिशत धान नोक्सान भएको अनुमान गरिएको कैलालीमा स्थानीय तहहरुले तथ्यांक संकलन
महिला उद्यमीका अनुभव आदानप्रदान
वीरगन्जमा सम्पन्न एकदिने युवा महिला उद्यमी सम्मेलनले महिला युवा उद्यमीहरु उत्साहित भएका छन् ।वीरगन्ज पहिलो
©2021 TBI Publications Pvt. Ltd. all Rights Reserved. karobardaily is not responsible for external sites contents.